Macallin Unai Emery oo shaaca ka qaaday xiddiga uu doonayey inuu keeno Kooxda Arsenal ka hor inta uusan la soo saxiixan Nicolas Pepe – Gool FM
(London) 17 Maajo 2020. Tababare Unai Emery ayaa daaha ka qaaday inuu doonayay Arsenal inay la soo saxiixato xiddiga garabka uga ciyaara Crystal Palace ee Wilfried Zaha, laakiin waxay badalkiisa soo qaadatay Nicolas Pepe intii lagu jiray suuqa kala iibsiga ee xagaagii hore.
Gunners ayaa si xooggan loola xiriirinayay Zaha ka hor xilli ciyaareedkan 2019-20, laakiin ugu dambeyntii waxay jabisay rikoorkeedii suuqa kala iibsiga ee ay kala soo wareegeen Pepe oo kaga yimid Lille, xiddiga reer Ivory Coast ayaa dhaliyay kaliya afar gool oo Premier League ah kal ciyaareedkan.
Emery oo laga ceyriyay shaqada kooxda bishii November ayaa sheegay inuu si adag ugu riixay Zaha inuu keeno garoonka Emirates, laakiin ay ka caroodeen kuwa ka sarreeya.
Pepe waa ciyaaryahan fiican, laakiin waqti ayuu u baahan yahay, markii aan halkaas joogay ma uusan i siinin qaab ciyaareedkiisa fiicnaa, waxaan door-bidayay mid bar garan kara horyaalka Ingiriiska, wax ka badan isaga, si uusan u baahanin waqti, waxaan la kulannay Zaha, ciyaaryahanka Palace.” Emery ayaa u sheegay Wargeyska Daily Mail.
“Waxa uu ahaa ciyaaryahan aan doonayay, sababtoo ah waxaan arki karay inuu badiyay kulamo badan kaligiis, waxaan arkay Zaha, qaar ka mid ah qaab ciyaareedyo cajiib ah, waxaana u sheegay in uu yahay ciyaartoyga aan ka doonayo kooxdan.”
“Waxaan la hadlay Zaha, waxaan shakhsi ahaan la joogi jiray isaga, isaguna wuxuu doonayey inuu yimaado, laakiin kooxda ayaa go’aansatay inay Pepe keenan kaasoo ka yaraa, wuxuu ahaa mid mustaqbalka leh, Zaha wuu guuleystay kulammada, sida uu inagaba nagu sameeyey”
Pepe ayaa dhaliyay lix gool siddeed kalena caawiye ka ahaa 32 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, halka Zaha uu dhaliyay saddex gool iyo shan caawin 30 kulan oo uu u saftay Palace.
Real Madrid, Barcelona iyo Man United oo la ogaaday Kooxda haatan ku horreysa tartanka loogu jiro saxiixa Jadon Sancho